Ekwentị gị adịghị nwayọ nwayọ? Anyị na-agwa gị ihe ị ga - eme iji dozie ya | Gam akporosis
Ekwentị m anaghị egbu oge
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
O nwetụla nke mere anyị niile jiri ekwentị. Arụ ọrụ ọ na-enye mgbe anyị zụrụ ya na ọsọ ọ na-agba, oge na-aga, ọ na-efu. Ruo mgbe ọ ga - eme ka anyị kwụsị inwe ndidi. Ha bụ ọtụtụ ihe mere ị ga-eji ama ekwentị gị ngwa ngwa na ekwentị mkpanaaka, na taa anyị ga-agwa gị banyere ha.
Ọ bụ ihe nkịtị maka ngwaọrụ, mgbe anyị hapụrụ ya, iji gosi ọkwa ya kachasị mma nke ọrụ. Ọ bụghị naanị na arụmọrụ arụmọrụ, ọ na-enwetakwa ọkwa batrị kachasị mma. Ọ bụghị banyere ọdịdị ahụ ya, nke na-ata ahụhụ oge ụfọdụ.
1 Gini mere ekwentị m jiri nwayọ nwayọ?
4 Ngwa ndị ahụ
5 Gịnị ka m ga - eme ka ekwentị m ghara ịla nwayọ?
6 Gbanyụọ ngwaọrụ ma gbanye ya
7 Hapụ ohere ngwaọrụ
8 Tọgharia na ntọala ụlọ ọrụ
Gini mere ekwentị m jiri nwayọ nwayọ?
Ugbu a ka anyị banye n’ime ihe kpatara ya nke n’eme ka ekwentị anyị belata. Ya mere, ịmara ihe kpatara ya ma ọ bụ ihe anyị na-eme ezighi ezi, anyị nwere ike itinye ụfọdụ azịza nakwa na ọ na-agbake larịị nke ka mma maka ịrụ ọrụ. N'ihi na ọ dị mkpa ịmata nke ahụ n'ọtụtụ n'ime ikpe ọ ga - ekwe omume na ama anyị weghachite.
Otu n’ime ihe ndị anyị kwesịrị iburu n’obi bụ afọ ole ka ngwaọrụ anyị dị. Anyị enweghị ike ịtụ anya na smartphone nke karịrị afọ atọ ma ọ bụ anọ ga-anọgide na-arụ ọrụ zuru oke. Anyị anaghị ekwu maka arụmụka ebumnuche esemokwu ahụ, naanị nke ahụ software kachasị elu, oge ụfọdụ na-achọkwa ngwaike iji kwekọọ.
Ọzọkwa anyị ga-iche ọ bụrụ na ngwaọrụ ahụ na-eweta ngwa ngwa ihe isi ike na igodo site na Internetntanetị. Ma ọ bụ ịdị nwayọ nke anyị na-ekwu maka ya na-ezo aka na obere mmiri mmiri nke ọ na - emegharị Ọbụna na menu dị n'ime. Anyị nwere ike ịnwe mkpuchi ma ọ bụ ọbụlagodi nsogbu mgbaàmà nwere ike ime ka anyị kwenye na ekwentị anaghị arụ ọrụ nke ọma na-enweghị nke a dị adị.
Ebe anyị na-ahụ otu n'ime ndị isi iche na a na ngwaọrụ okụt maka ezigbo arụmọrụ. Mgbe anyị wepụtara ekwentị, dịka iwu anyị na-ahụ ya na pasent dị elu nke nchekwa dị. Chekwaa ya site na ọnwa ma ọ bụ afọ iji ya ka emechara mgbe ụfọdụ ọbụna nwere n'ụzọ zuru ezu.
Ole na ole faịlị, obere ngwa, na ọtụtụ ohere anaghị emeghe ụzọ maka ịrụ ọrụ sistemụ kacha mma. Dị ka iwu n'ozuzu, ama nke nwere ihe ncheta zuru oke na-aghọ ngwa ngwa nwayọ nwayọ. Sistemụ arụmọrụ na-enweta ọtụtụ ihe mgbochi iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma. Na inwe arụmọrụ “kwesiri ekwesi’ ’ị chọrọ akụkụ nke ebe nchekwa dị.
Kedu ihe kachasị mma ịme n'oge a? Ozugbo anyị gụrụ na ebe nchekwa ngwaọrụ zuru oke enwere otutu nhọrọ di iji belata ibu nke data echekwara. Na njedebe nke post anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ bara uru iji mee ka ekwentị gị laghachi na ihe ọ dị. Obi abụọ adịghị ya, otu n’ime omume ndị kachasị baa uru ga-abụ ihichapụ faịlụ niile, ngwa, foto, wdg. Ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ dị gị ọrụ na-agwụ ike na ọbụna na-agwụ ike enwekwara nhọrọ iji mee ya site na obere usoro. Inwe ngwaọrụ ka anyị wepụtara ya ga - eme ka ọ dị ọhụrụ n'ụzọ dị oke egwu ma ị ga - enwe ike enwe ekwentị gị ọzọ dị ka mgbe ọ dị ọhụrụ.
Otu n’ime ihe kachasị njọ nwere ike ime na igwe anyị bụ na ndị nrụpụta ahụ kpebiri "ịkpụ" na mmelite nke ụdị anyị. Ọ bụ ezie na ihe kacha dị ịtụnanya bụ nke ahụ anyị agaghị enwe mmelite nche. Eziokwu bụ na mmelite ndị a na - emekwa ka ngwaọrụ ahụ gaa n'ihu na - emelite ya n'ihe gbasara arụmọrụ na arụmọrụ.
Na-adabere obere mmelite sistemụ arụmọrụ ọ na-amalite na-ahapụ anyị n'akụkụ nke dị iche iche ngwa mmelite na-eso ije na njikarịcha nke sistemụ. Na-arụ ọrụ na nsụgharị ochie nke ngwa o nwekwara ike ime ka anyị ghara iji ihe ọhụrụ anyị ga-ahọrọ na-eme ihe ma ọ bụ mee ha anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ọtụtụ mgbe, n'oge ịzụta ekwentị ọhụrụ, A na-akwado ụdị ochie nke okpu njedebe nke ụlọ ọrụ dị na ọrụ. Nke a bụ ezigbo echiche dị ka iwu, ebe ọ bụ na mgbe otu afọ gachara, ụdị mkpanaka pụrụ iche ga-anọgide na-abụ n'ụzọ zuru oke. Mana ọ bụrụ na anyị lelee nsụgharị ochie, ọ ka na-agbanyekwa ịbụ onye ama ama ama n'ọtụtụ akụkụ, anyị nwere ike ihie ụzọ nke inweta ngwaọrụ ga - ahapụ oge mmelite.
Ngwa ndị ahụ
na ngwa, yana foto, ha jikwaa ogide akụkụ dị ukwuu nke ncheta nke igwegharị anyị. Anyị chọrọ ịnweta ngwa maka ihe niile, ọtụtụ maka ọrụ ahụ, ma n'ezie ịnwe ndị dị mkpa na itinye oge ahụ. Nke a bụ ihe ndabere nke sistemụ nrụọrụ na Ezubere ekwentị maka ha.
Ngwa ndị ahụ ha ghọrọ usoro ọtụtụ na mmelite ọ bụla mma akụkụ Ezubere iji mee ka onye ọrụ ahụ mara mma. Nke a anaghị eme naanị ogide na karia oghere na igwe anyi. Nke nta nke nta, ọkwa dị otú ahụ nke mkpa maka akụrụngwa, jiri ihe ncheta na ndabere ọcha mee arụmọrụ tụlee.
Maka gị ikpebi otu ma ọ bụ ngwa ọzọ, ndị mmepe na-agba mbọ ime ka ha maa mma dịka o kwere mee. Oge ọ bụla ha nwere atụmatụ ndị ọzọ ma nwekwuo nhọrọ maka ojiji. Nke a, na mgbakwunye na ịme ka ha nwekwuo ọtụtụ ihe, na-eme ka ha weghara ohere ma rie ọtụtụ akụ n’otu oge.
Gịnị ka m ga - eme ka ekwentị m ghara ịla nwayọ?
Iji malite, ọ dị mkpa ịmata nke ahụ nsogbu nke ngwa ngwa nke ngwa anyị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile nwere ihe ngwọta. O doro anya, dịka anyị kwurula na mmalite, na ọ bụrụ na anyị nọ Site na ekwentị nke dịlarị ọtụtụ afọ, ụlọ maka imeziwanye pere mpe karịa. Ihe anụ ahụ dị n'ime ekwentị ahụ na-akawanye njọ, nke "dịwanye njọ" yana ngwanrọ na-enweghị emelite.
Ma ọ bụrụ na ekwentị gị adịghị ochie, ị tụlere na ọ naghị arụ ọrụ dịka o kwesiri. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ị chọpụtala ọrụ ka njọ nke na-eme ka ekwentị gị nwayọ nwayọ, ma e jiri ya tụnyere etu ọ dị mgbe ị hapụrụ ya, anyị ga-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ dịka ọ dị na mbido. Ekwentị gị adịghị nwayọ nwayọ? Enwere ike na obere oge ...
Gbanyụọ ngwaọrụ ma gbanye ya
Ọ dị ka nzuzu, ọ nwere ike bụrụ na ọ gaghị arụ ọrụ. Mana enwere ọtụtụ n’ime anyị anyị agbanyụbeghị ekwentị n’ime izu. Mgbe anyị gbachara ya otu ụbọchị zuru ezu, mgbe anyị lakpuru ụra, anyị na-ahapụ ya jikọtara na chaja na-agbanyeghị ya. Ọ bụrụ na anyị emee nke a site n’omume, ekwentị gafere sizu niile na-enweghị mgbanyụ na on.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị na ị bụ otu n'ime ndị na-anaghị agbanyụ ekwentị ọ bara uru ịnwale, ebe ọ bụ na ọ dị mfe ma na-eri ihe ọ bụla na-eme ya. Sekọnd ole na ole iji ekwentị gbanyụọ kpamkpam nwere ike ịme a na-edozi usoro, lee doro anya cache na mechie kpam kpam niile Ngwa nwere ike ịdọrọ akụrụngwa na ndabere.
Hapụ ohere ngwaọrụ
Dị ka anyị gwara gị, iji oke nchekwa nke ekwentị nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ọrụ ya. Akafiakde ese na ngwa anyị arụnyere na mma ngwaọrụ anyị na-ahụ ụfọdụ na-enweghị na-eji na a ogologo oge. Iwepụ obere ngwa ọ bụ ezigbo echiche mgbe niile.
Anyị na-enweta ohere ngwa ngwa, na anyị nwere ike ibudata ha ọzọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ha. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe ihe ndị kasị eji ngwa na ekwentị anyị, kwa anyị nwere ike iwunye nsụgharị "ọkụ" nke Ngwa. Oge obula anyi choputara ngwa ngwa ndi ozo, otutu otutu oru ya ma o nweghi ebe nchekwa. Ọ bụ ya mere Facebook Lite, ihe nchọgharị Google Lite, ma ọ bụ Ozi Lite, dịka ọmụmaatụ.
Foto bụ ihe ọzọ bụ isi ihe kpatara ọnụọgụ nchekwa nke ekwentị mkpanaaka. A ngwa ngwa, free na nnọọ pụrụ ịdabere na ngwọta bụ nyefee foto gị na Foto Google, ọmụmaatụ. Y’oburu na gi butere oria obula ọrụ nchekwa ma ọ bụ ị na-ahọrọ ibudata ha na kọmputa ha bụkwa nhọrọ. Site na ịhapụ Gigas ole na ole foto nọ na ya, ekwentị na-amalite ịgbanye kpamkpam.
Tọgharia na ntọala ụlọ ọrụ
Nke a bụ otu n'ime nhọrọ "egwu" kachasị. Tọgharia na ntọala ụlọ ọrụ na-agụnye ihichapu data niile na ekwentị. N'ezie ọ dị mma dị mkpa iji mee ndabere tupu oge eruo nke faịlụ niile dị mkpa. A) Eeh anyị nwere ike ịchọpụta otú o si rụọ ọrụ na mbido mobile anyị.
Ihicha ihe niile anyị na-eme iji kpochapụ omume malfunctions. Ọzọkwa anyị ga-ewepụ malware niile nwere ike ịwụnye n'amaghị ama na ekwentị anyị. Obi abụọ adịghị ya, a tọgharịa sỌ ga-eme mgbanwe dị egwu n'ụzọ ngwaọrụ a si arụ ọrụ.
Anyị ga-enwerịrị ngwa ndị kachasị mkpa site na ncha. Yabụ, ọ bụrụ na enwere ụfọdụ ngwa anyị na-anaghị echeta ma ọ bụ na-adịghị anyị mkpa, o doro anya na ha agabigala. Inggụ na nkwado ndabere na Google Drive, usoro ahụ ga-adị ngwa ngwa karịa ka ọ dị ka ọ dị. Nwee obi ike na ọ bụrụ na ekwentị gị adịghị nwayọ, iweghachi ntọala ụlọ ọrụ ga-aba uru. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, ha dị dị iche iche anyị nwere ike ịme iji gbalịa ime ka smartphone anyị laghachi na ihe ọ bụ. Ọ bụrụ n’inwere nwayọ nwayọ, gbaa mbọ nwaa ha tupu ịnye ya nwụrụ anwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Ekwentị m anaghị egbu oge
Xiaomi Mi Lelee: Na-achọ uru maka ego
8 egwuregwu kacha mma maka gam akporo